Somali - 01. Conversation - Booklet 6: Sidee qarsoodi ah Midnimada Saddexmidnimada Quduuska ah ayaa lagu sharxi karaa Muslinka? | Grace and Truth
Search in "Somali":
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 6 Unity of the Trinity
01. La sheekaysiga Muslimiinta ku saabsan Masiixa
6 - SIDEE QARSOODI AH MIDNIMADA SADDEXMIDNIMADA QUDUUSKA AH AYAA LAGU SHARXI KARAA MUSLINKA?
Caqabadda labaad ee ugu weyn ee qofka muslimka ah ee noqoshada Masiixiyiinta waa xukunkooda ay masiixiyiintu ku rumeysan yihiin saddex ilaah. Muxuu Quraanku macno ahaan u bari karaa tan? Waa maxay khaladaadka aabaha, Aabaha, iyo Ruuxa Quduuska ah ee galay diinta Islaamka? Sideed uga caawin kartaa qof muslimka ah inuu u furo Ilaahay Aabaha xagga Wiilkiisa Ciise Masiix? Su'aalahan mar labaad ayaa looga hadlayaa iyada oo ku saleysan Axdiga Hore, Axdiga Cusub, dareenka guud, Qur'aanka iyo maraggaaga shakhsi ahaaneed.
6.02 -- Diidmada of Trinity Quduuska ah by Islam
6.03 -- Diidmada ilaahnimada Ciise Masiix
6.04 -- Diiditaanka ilaahnimada Ruuxa Quduuska ah
6.05 -- Maxaa ka maqan Islaamka?
6.06 -- Ereyga Axdiga Hore ee Midnimada Saddexmidnimada Qudduuska ah
6.07 -- Qirashada Axdiga Cusub ee Midnimada Saddexmidnimada Qudduuska ah
6.08 -- Tixraacyada Meelaha Aasaasiga ah ee laga helo suurtogalnimada midnimo ee Saddexmidnimada
6.09 -- Calaamadaha Midnimada Saddexanka Quduuska ah ee Qur'aanka
6.10 -- Markhaatiga Midnimada Saddexanka Kariimka ee Markhaatiyadaha Masiixiyiinta
6.11 -- Baaris
6.01 -- Sidee qarsoodi ah Midnimada Saddexmidnimada Quduuska ah ayaa lagu sharxi karaa Muslinka?
Qofkasta oo u hadlaya Muslinka waxa uu aqoonsanayaa inuu rumaysan yahay rumaysadeenna Ilaah ee Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah sida dembi aan la aqbali karin. Islaamku wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuusan jiri karin Ilaah kale maahee Qof kasta oo wadaaga Wiilka ama Ruuxa Quduuska ah leh ee Abuuruhu u arko inuu yahay cadowga Alle iyo Malaa'igihiisa oo dhan (Suras al-Baqara 2:97-98; al-Ma'ida 5:73).
Diidmada Saddexaad ee Qudduuska ah ee Muslimiinta waxaa ku yaal dhinacyo badan. Tan waxaa lagu soo koobayaa xogta asalka ah ee wada hadalka Muslimiinta.
Muxammad wuxuu ku adkeeyay masiixiyiinta: "Ha odhanina saddex, taasi way kuu fiicnaan lahayd!" (Sura al-Nisa '4:171). "Hooyo Ilaah ma jiri karto mana dhalatay wiil ay dhashay" (Sura al-Ma'ida 5:116). "Qofna waa inuusan aqbalin qof kale sida Eebihiis" (Sura Al 'Imran 3:64; al-Tawba 9:31). "Alle ma aha Masiixa" (Suras al-Ma'ida 5:17,72; al-Tawba 9:31). "Waayo, Qaadirku wuxuu noqonayaa mid caqli gal ah oo lagu burburinayo Masiixa iyo hooyadiis, haddii ay sheeganayaan ilaahyo" (Sura al-Ma'ida 5:17).
Qirashada Ciise Masiix waa Wiilka Ilaah si buuxda loo diido 17 jeer Quraanka (Sura al-Tawba 9:30 a.o.). 'Isa waxaa la yiraahdaa wiilka Maryan laakiin marnaba Wiilka Ilaah. Waxa loo arkaa inuu yahay abuur la mid ah sida Adam (Sura Al 'Imran 3:59). Eebe wuxuu amar ku bixiyey: sidaas ayuu ahaa (Suras al-Baqara 2:117; Al 'Imran 3:47,59; Maryam 19:35). Tani waa khalad, sida ku jirta Qur'aanka Eebe wuxuu si cad u qeexayaa: "Waxaan kufaragnay qaar ka mid ah Ruuxeena (Maryan)"; sidaas darteed 'Isa waxaa laga abuuray iyada (Suras al-Anbiya' 21:91; al-Tahrim 66:12). Muslimku waxa uu rumaysan karaa dhalashada Masiixa ee Maryan bikradda ah, laakiin sidoo kale sheeganaysa liddi ku ah diinta masiixiga: Waxa la abuuray, marna kama dhalan, umana dhalan Alle.
Quraanku waxa uu tilmaamayaa in Masiixu yahay addoonkii Ilaahay (Suras Al 'Imran 3:172; Maryam 19:30), Safiirkiisa (Suras al-Baqara 2:87, Al Imran 3:49,53; al-Nisa '4:157,171; al-Ma'ida 5:75; Al-An'am 6:61) iyo nabi (Sura Maryam 19:30). Waxa uu Alle u gudbiyay (Suras al-Ma'ida 5:52,117, al-Tawba 9:31), wuxuu baryay Elohim (Allehma: Sura al-Ma'ida 5:114) wuxuuna aqoonsanayaa Eebe inuu yahay Master, oo isaga siiyey tilmaamaha (Suras Al 'Imran 3:51; al-Ma'ida 5:72,114,117; Maryam 19:36; al-Shura 42:13, al-Zukhruf 43:64).
50-ka aayadood ee Quraanka Ciise ayaa laga jaray ilaahnimadiisa. Digniinaha ruuxiga ah ee Rasuulka John wuxuu khuseeyaa Islaamka sidoo kale (1 Yooxanaa 2:18-25; 4:1-5).
Waa inaynu aqoonsanno in Quraanka maaha oo keliya in la caleemo saaro Rabbi Ciise Masiix, laakiin sidoo kale wuxuu sheegayaa Ruuxa Qudduuska ah inuu yahay abuur aan ahayn Ilaah. Alle wuxuu ku hadlaa dhowr jeer oo ah "Ruuxeena" (Sura Maryam 19:17, al-Anbiya '21:91; al-Tahrim 66:12), ama "ruuxayga" (Suras Sad 38:72; al-'Ankabut 29:15), laakiin xaaladaha oo dhan ayaa ruuxa loo arkaa in la abuuro oo aan ilaah ahayn. Islaamku maaha mid madax bannaan oo Ruuxa Quduuska ahi waa mid la rumaysan karo maxaa yeelay Alle wuxuu noqon karaa oo kaliya hal ama labo maahan.
Quraanku wuxuu sharxayaa in Jibriil (Gabriel malaa'igta) uu yahay ruuxa ka yimid Alle (Suras al-Baqara 2:97-98; al-Tahrim 66:4) kaas oo u muujiyay muujinta Eebihiis Zakariye, Mary, 'Isa iyo Muhammad . Waxa lagu tilmaamaa inuu yahay "Ruuxa Quduuska ah", oo xoojiyay Ciise oo ku muujiyay mucjisooyinkiisa (Suras al-Baqara 2:87,253, al-Ma'ida 5:110; al-Nahl 16:102). Islaamka dhexdiisa, ruuxani wuxuu ahaanayaa addoon ka mid ah Alle, isaga oo amarkiisu yahay (Suras al-Qadr 97:4; al-Shura 42:85; al-Shura 42:52), oo raacaya tilmaamaha si daacad ah (Sura al-Shuara 26:193). Wuxuu aad u sharfay Muslimiinta, inkastoo ayan garanayn cidda dhab ahaantii.
Hordhacan gaaban kuwan oo ka fakaraya maskax ahaan waxay fahmi doonaan mabaadi'da aasaasiga ah ee wadahadalka aan la yeelanay Muslimiinta: Islaamku ma jiri karo Aabbe, wiil la'aan, iyo Ruuxa Quduuska ah (Sura al-Ikhlas 112:1-4).
Ma jiro badbaado ruuxi ah oo ku dhex jira daryeelka Aabbaha-Ilaaha, xiriir aan shakhsiyadeed la laheyn Ilaaha Qaadirka ah, oo aan la hubin cafis denbiyada oo dhan, suurtagal maaha in la aqoonsado Quduuska Quduuska ah (1 Korintos 12:3; 15-16), midho midna Ruuxu (Galatiya 5:16-26) oo aan rajo lahayn nolosha weligeed ah (Yooxanaa 11:25-26). Meeshii Ruuxa Quduuska ah la aqoonsan yahay waxaa jiri kara fikradda ruuxiga ah ama nolosha Christian.
Marka laga reebo dadaalkeena ah inaan bixinno oo aan u furno Injiilka Muslimiinta, shafeeco sii socota ayaa lagama maarmaan u ah in Ciise Masiix uu ruuxiisa u diyaariyo Ruuxiisa oo uu siiyo nimcada inuu maqlo eraygiisa, si uu u fahmo oo uu u sameeyo. Qofna ma awoodi karo inuu sharaxo qarsoodiga Quduuska Quduuska ah ee Muslinka ah ilaa Ruuxa Quduuska ahi uu abuuro dareen uu ku muujiyo Ilaaha runta ah iyo diyaargarowga inuu maqlo eraygiisa oo uu helo nuurka ruuxiga ah ee galaya mugdiga qalbiga aadanaha.
Haddii aan rabno in aan u sharaxno Injiilka Muslimiinta waa inaanan ka xanaaqin diidmada iyo ruuxa geeska ah kaas oo ku dhufan doona wejiyadayada. Jacaylka Masiixu waa ka xoog badan yahay addoonsiga guud ee Islaamka. Raadinta doodo wax ku ool ah si ay u sharxaan midnimada Saddexmidnimada Qudduuska ah ee muslimiinta, shan ilaha wareysiga waxaa laga heli karaa:
Injiilka iyo nebiyadii waxaan ka heli karnaa dhowr faallooyin ah in Ilaah uu yahay mid saddexaad. Maragga Axdigii Hore wuxuu muhiim u yahay muslimiinta xiisaha leh maxaa yeelay waxay muujinaysaa in Quduuska Quduuska ahi uusan ahayn mucjiso Kiristanka ah, laakiin wuxuu qeexayaa sida dhabta ah ee Ilaah tan iyo daa'in.
Aayadaha ugu horreeya ee Kitaabka Qudduuska ah ayaa mar hore ka marqaati furaya Quduuska Quduuska ah;
Bilowgii 1:1-3: Bilowgii Ilaah wuxuu abuuray Samooyinka iyo Dhulka. Dhulkuna wuxuu ahaa mid aan waxba tarayn, oo gudcurkuna wuxuu u ekaa moolka dhexdiisa, oo Ruuxa Ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha. Markaasaa Ilaah wuxuu yidhi, Iftiin ha ahaado: iftiin baana ahaaday.
Hordhacdan Kitaabka Qudduuska ah waxaan ka akhrisanay Ilaah, Ruuxiisa iyo Ereygiisa. Yooxanaa wacdiyuhu wuxuu ku qirtay in Ilaah uu dunida uumay abuuray Ciise, eraygiisa oo la dhisay (Yooxanaa 1:1-4).
Aayaddan ugu horeysay ee Kitaabka Qudduuska ah ayaa sidoo kale nagu hagaya inaan Ilaahay weydiisanno in Ruuxiisa uu ku kaco Muslimiinta shakhsiyaadka ah, qoysaska, tuulooyinka, magaalooyinka iyo waddamada, in maskaxdooda iyo qalbiyadooda la diyaariyo illaa uu Eebbe odhan karo: "Ha iftiin!" Oo waxaa jiray iftiin!
Gudaha Bilowgii 1:26 Ilaahay wuxuu odhanayaa: Aanu ninkan ka dhigno muuqaalkiisa, siduu u egyahay!
Ilaah (Elohim) mararka qaar wuxuu ku hadlaa jamac ahaan (annaga), oo ay ku jirto suurtogalnimada Saddexmidnimada. Haddaba, Yuhuudda iyo Muslimiinta ayaa si kastaba ha ahaatee ugu yeeraan foomkan tiro badan majestatis. Wada xaajoodka wafdiga Kiristanka ee Wadi Nadjran (Waqooyiga Yaman) Muhammad ayaa si qoto dheer u taabtay aayaddan si markaa kadibna uu u ogolaado inuu Alle ku hadlo jamaca Quraanka sidoo kale.
Elohim, erayga Cibraaniga ah ee Ilaah waa jamac. "El" waxa loola jeedaa awoodda, awoodda iyo xoogga (Matayos 26:64), "isaga" macnaheedu waa "waxay", sidaa darteed Elohim waa loo akhriyi karaa "kuwa xoogga leh waa jamac". Hadalka Allaah ee Islaamka waa la fahmi karaa, sida "al-el-hu" waa loo akhriyi karaa "awoodda uu yahay" (qof keliya). Laakiin Ilaaha Quduuska ah ayaa ah in la fahmi karo sida midnimada. Muxammad wuxuu ku dhawaaqay ereyga Elohim inuu yahay luqadda Carabiga oo wuxuu u adeegsaday sida Allahumma shan jeer oo ku jira qoraallada muhiimka ah ee Qur'aanka (Suras Al 'Imran 3:26; al-Ma'ida 5:114; al-Anfal 8:32; Yunis 10:10; al-Zumar 39:46). Waayo, magaca Ilaah ee Axdiga Hore wuxuu u muuqday inuu yahay furaha salaadda oo si xaqiiqo ah looga jawaabi doono oo loo fulin doono.
Bilowgii 18:1-3 waxaan akhrinay in Ibraahim soo booqday saddex nin. Laakiin wuxuu u yeedhay "Sayidkayga", kaas oo ah mid la mid ah.
Tirintii 6:24-27 waxaan ka helaynaa Abaalmarinta Haaruun, oo ah "Sayid" oo lagu magacaabay saddex jeer. Kiniisadaha qaarkood waxay tan ku aqoonsadaan barakada Aabaha, barakada Wiilka iyo barakada Ruuxa Quduuska ah, sida ducada "hal" Sayid.
Sabuurradii 2:1-4 waxaan ka akhrinay kacdoonka aadanaha ee ka dhanka ah Rabbiga iyo Masiixiisa. Laakiinse Ilaaha Qaadirka ah baa iyaga ku qoslay, oo wuxuu ku yidhi, ‘’Adigu waxaad tahay Wiilkayga; Maantaan ku dhalay!’’. (Sabuurradii 2:7). Tani waxa ay dhacday 1,000 sano ka hor Ciise Masiix. Waxa ay tilmaamaysaa furitaanka ruuxa ee Wiilka ka baxsan Aabbaha ka hor, kuwaas oo aan loo fahmin sidii laga bilaabo biknoolojiga ku nool Maryan. Ciise waxaa jiray waqti dheer ka hor inta uusan ku dhicin. Isagu waa Ilaaha weligiis ah xagga Ilaaha weligiis ah! (Yooxanaa 1:14; Filiboy 2:6-7).
Ishacya 9:6 ayaa tusaale u ah Midnimada Saddexmidnimada: Waayo, ninkanu waa na dhashay, oo wiilkana waa in la siin doonaa. Dawladduna waxay ku jiri doontaa garbihiisa. Oo magiciisana waxaa loo bixin doonaa Kan Quduuska Ah, iyo Ilaaha Qaadirka ah, iyo Aabbaha Daa'imka ah, iyo Amiirka Nabadda.
Aayaddani waxa ay sharraxaysaa in Wiilka la ballanqaaday uusan ahayn La-taliyaha Wonderful iyo Ilaaha Qaadirka ah, laakiin isaga oo ah Aabbaha Everlasting qudhiisa ayaa noqday nin. Halkee kale ayaa ahayd ilmo cusub oo dhashay isla isla markaasna Aabbihiis? Tani waxay muujinaysaa 700 sano ka hor Ciise Masiix dhulka ku noolaa. Qoraalkan waa markhaati lagama maarmaan u ah xaqiiqada weligeed ah ee Ilaaha Saddexmidnimada ah.
Sabuurrada 110:1 waxay u eg yihiin garaacista durbaanka illaa waqti iyo daa'in; Rabbigu wuxuu Sayidkayga ku yidhi, Midigtayda fadhiiso, Ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo.
Kaniisaddii hore waxay fahamtay aayaddan sida ballanqaadka oo sharraxaya kor u qaadista Ciise iyo jaahilkiisa jannada (Matayos 26:64, Falimaha Rasuullada 2:25,34; 1 Korintos 15:25, Filiboy 2:8-9; Cibraaniyada 10:12 -13). Wiilka wuxuu fadhiistay Aabbihiis carshigiisa (aayadaha 3:21). Labaduba waxay xukumaan caalamka dhammaystiran midnimo. Tan iyo markii Wiilku dhammeeyey furashada aadanaha, Aabbuhu wuxuu cadaadiska oo dhan ka dhigayaa "cagaha cagihiisa!" Ballan-qaadkan waxaa ka mid ah awood kasta oo geesinimo leh, waxaanu ku baaqayaa iimaankeenna guusha Ilaaheenna!
Kuwa la hadlaya Muslimiinta waa inay xoogga saaraan balanqaadyada ku jira Axdiga Hore si ay u sharaxaan midnimada Masiixa ee uu la leeyahay Aabbihiis, sababtoo ah hirgelintooda Axdiga Cusub waxay u muuqdaan kuwo ‘’aan’’ loo dulqaadan karin "Musliminta". Wax kastoo Alle amar ku bixinayo waa in la sameeyaa hal mar. Haddii uu ballan-qaadayo waxa shaki ku noqon doona dhabta. Qofna ma joojin karo dhammaystirka waxyigiisa. Muslimiinta qaarkood 333 ballamood oo Axdiga Hore ah oo dhammaystiray Axdiga Cusub ayaa noqon kara caddayn xooggan oo ku saabsan midnimada Axdiga Saddexaad. Ballanqaadyadaas iyo dhammaystirkaas waa in la akhriyaa oo la bartaa wadnaha.
Afarta Injiillada, Fariimaha Rasuullada iyo Muujintii ayaa waxaa la isku daraa cabsi galinta midnimada Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Haddii aan helno Muslimiin oo diyaar u ah inay akhriyaan Axdiga Cusub, waa in aan xoogga saarnaa iyaga midnimada Saddexmidnimada. Muslimiinta iyo Yuhuudda waxay fahmaan Ilaah inuu yahay "kan keliya". Masiixiyiinta qaarkood waxay xoogga saareen saddex Ilaah. Waa inay toobad keenaan oo ay u jeestaan carruurtii Ibraahim si ay u bartaan inay sharxaan midnimada Quduuska Quduuska ah ee qaababka fikirka.
Matayos 1:23: Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta, oo waxay dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxay u bixin doontaa Ciise Masiix, oo la odhan jiray, Kaalay oo Ilaah.
Immanuel waa mid ka mid ah 250 magacyada Ciise ee Kitaabka Quduuska ah. Isagu waa Ilaah iyo nin run ah isku mar. Isaga Ilaah baa inala jooga. Ballanqaadkan Ishacyaah 7:14 iyo dhammaystirka wuxuu na siin karaa raaxo weyn.
Markii la baabtiisay, Ciise ayaa markiiba ka yimid biyaha; oo bal eeg, samadu way furmeen, oo wuxuu arkay Ruuxa Ilaah oo sida qoolley oo kale u soo degaya oo dushiisa imanaya. Oo kolkiiba jannada waxay u timid cod leh oo leh, Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay." (Matayos 3:16-17).
Wixii Muslim ah sheekooyinka baabtiiska Masiixa (Matayos 3:16-17; Markos 1:9-11, Lukos 3:21-22, Yooxanaa 1:31-34; 5:37-38) waxaa ku jira xaqiiqo xiiso leh: Cod baa samada ka yimid; Muslimiintu waxay fahmaan arintan inay muujiyaan toos. Qofna ma hor istaagi karo Ilaaha Qaadirka ah. Bal yaa isaga ka sarreeya miyuu yidhaahdaa; ‘’Isagu waa waalan yahay kan aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay?’’ Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku soo degay isaga oo ah qalabka adeeggiisa inkastoo xaqiiqda ah inuu ka dhashay Ruuxa Quduuska ah. Ciise qudhiisa ayaa la baabtiisay Webi Urdun oo ka hor jeeday diidmadii Yooxanaa Baabtiisaha. Ciise wuxuu ahaa dembi la'aan oo uma baahneyn in la baabtiiso. Laakiin isagu si aamusnaan ah ayuu dembiyadeenna oo dhan iskaga qaatay intii uu bilaabay adeeggiisa.
Sidaas darteed Baabtiisku wuxuu ku qayliyey: "Bal eeg, Wanka Ilaah, kan dembiga dunida qaado." (Yooxanaa 1:29)
Sababtuna waa sababta Ruuxa Quduuska ah uu isaga u soo degay sidii qoolley oo isaga ku hadhay.
Taasi waa sababta Aabbuhu u marag furay: "Tani waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay!"
Baabi'inta Masiixa waa qoraal muhiim ah kaniisadda si loo fahmo Midnimada Saddexmidnimada Qudduuska ah. Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah ayaa si wadajir ah uga wada shaqeeyey badbaadada nimankooda bilowgii adeegga Ciise.
Mat 12:18 wuxuu ka hadlay addoonkii Rabbiga oo uu doortay, Kan uu jecel yahay iyo kan uu jecel yahay. Oo wuxuu ku soo dejiyey Ruuxiisa, Sidaas daraaddeed wuxuu dadka u soo diray caddaaladda. Dhammaystirka Ishacyaah 11:1-5 waxa uu muujinayaa, in Rabbiga, uu addoonkiisa iyo Ruuxiisu yahay mid isku mid ah midnimada Ciise. Noloshiisa oo dhan ma ahan oo keliya nolosha qof shakhsi ah, laakiin wuxuu ku sii jirey gudaha Saddexmidnimada.
Luukos 4:18-19a: Ruuxii Rabbiga ayaa iigu jira, maxaa yeelay, wuxuu ii subkay inaan wacdiyo injiilka sabtida. Wuxuu iigu soo diray inuu bogsiiyo kuwa qalbi jabay si ay u bartaan xorriyadda kuwii maxaabiisnimada ka soo noqday, oo kuwii indhaha la'na wax bay ka qorayeen, oo waxay u jeediyeen xadgudubyo ay soddohdeed ku sameeyeen oo ay ogeysiiyeen sannadda qaabbilaadda ah ee Rabbiga.
Luukos 4:18 Ciise Masiix wuxuu naftiisa ku muujiyay Naaseret isagoo leh isagoo leh: "Ruuxa Rabbiga ayaa iigu jira ..." Qoraalkan gaaban wuxuu mar kale ku celinayaa Quduuska Quduuska ah maxaa yeelay Ilaah, Ruuxiisa iyo Ciise wuxuu u muuqdaa mid isku mid ah. Masiixu waxa uu sharraxay xaqiiqadan oo wuxuu yiri: "maxaa yeelay wuxuu ii subkay". Ereyga Masiixu wuxuu ka dhigan yahay: Masiixa, kan subkay.
Maxay ahayd sababta Ciise loo subkay? "Injiilka dadka injiilka u wacdiyo oo bogsiiyo kuwa qalbi jaban!" Qof kasta oo qaata subagyada Axdiga Cusub (2 Korintos 1:21; 1 Yooxanaa 2:20,27) wuxuu marqaati furi karaa markhaati ahaan Ciise, waayo Masiixi waa Masiixi oo keliya haddii Ruuxa Rabbiga uu ku jiro isaga si uu u buuxiyo baaqiisa (Ishacyaah 61:1-2; Rooma 8:10-16).
Dhamaan awoodda ayaa la siiyay aniga oo igu jira samada iyo dhulka. Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa, oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado. (Matayos 28:18-20).
Guddiga weyn waxaan akhrinay in qof kasta oo go'aansada inuu raaco Masiixa waa in lagu baabtiisaa magaca Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Maxay amarkani u tiri "magacyada"? Sababta oo ah Saddexda waa mid! Magaca dhabta ah ee Ilaahay waa "Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah".
Yooxanaa 10:30: Injiilka Yooxanaa waxaan akhrinay marqaati furka ah ee adhijirka wanaagsan: aniga iyo Aabbahay "laba" ?! Dabcan maaha, laakiin "mid"! Maxaynu haddaba mar walba ku wacdinnaa laba, haddii Ciise yiraahdo hal keliya? Qodobkani waxa uu u baahan yahay in laga towbad keeno dadka Masiixiyiinta ah iyo Yuhuudda. Aabaha iyo Wiilku waa mid keliya oo aan ahayn laba! Waa inaan bedelnaa maskaxdeena waana inaan baranno inaan ku fekereyno oo keliya habka farsamada iyo farsamada, laakiin sidoo kale marka la eego xaqiiqada ruuxiga ah, iyo inaan isu hagaajino kuwa doonaya iyo rumaystayaasha ee Orient.
Markuu markhaati furan yahay Ciise oo ku saabsan naftiisa (Yooxanaa 14:9-11) waxaanu ku akhrinaynaa: "Kii i arkay wuxuu arkay Aabbaha." Qirashadani waxa ay ka markhaati furi doontaa midnimada Aabihiis isaga oo muuqda iyo muuqaal, sida dhammaystirka Bilowgii 1:27. Sidaa dabadeed Ciise wuxuu sheegay in erayada uu ku hadlayo uusan ahayn midkiisa, laakiin Aabbaha, isaga oo ku noolaa, ma aha oo kaliya isaga oo ku hadlaya isaga, laakiin waa waxa uu ku hadlayo. Ciise wuxuu ku jiraa Aabbaha iyo Aabbaha isaga. Tani waxay hoosta ka xarriiqaysaa midnimadooda dhamaystiran oo ah nuxurka iyo ruuxa.
Yooxanaa 14:23 Ciise wuxuu yidhi: "Haddii nin i jecel yahay, ereygayguu dhegaysan doonaa, oo Aabbahayna waa jeclaan doonaa, oo waannu u iman doonnaa, waanna u roonaan doonnaa isaga.
Ciise waxa uu muujinayaa in Ruuxa Qudduuska ah uu ku dhexjiray kuwa raacsan. Qoraalkan dhexdiisa Ruuxu waxa uu u muuqdaa mid keliya oo keliya oo aan la wadaagno Aabaha iyo Wiilka, laakiin wuxuu iyaga u matalaa sida Ruuxiisa.
Saddexda ballan ee ku saabsan lataliyaha inuu yimaado (Yooxanaa 14:26; 15:26; 16:13-15) waxaan ka akhrisanay 10 dabeecadood oo midnimada iyo wada shaqaynta Aabbaha iyo Wiilka ee Ruuxa Quduuska ah. Ruuxu kuma faani karo naftiisa ama kuwa hibada leh ee awoodda leh laakiin wuxuu ku ammaanayaa Ciise. Ciise xitaa kuma faanin laakiin markasta wuu ammaanay Aabbihiis. Ilaahayagu waa mid miisaaman oo u naxariis badan (Matayos 11:28-30)! Ma jirto khatar ah in rabshad gudaha Trinity Quduuska ah. Xubinnimadu ma badna, laakiin weligeedba way ku sarraysaa! Taas aawadeed ayuu Ilaah u siiyey amar uu ku xukumo wiilkiisa oo dhan oo ku jira samada iyo dhulka. iyo Ciise sidoo kale loo oggolaaday Ruuxa Quduuska ah inuu dhiso kaniisad. Qummanaanta jacaylka rabbaanigu waa mid ka mid ah siraha midnimada midnimada Quduuska Quduuska ah. Waan fahmi karnaa Ilaaheena kaliya markaan u ogolaaneyno inuu bedelo dabeecadeena oo aanu naga dhigo inaan is-hoosaysanno, sida uu yahay. Tani waxay ka hor imanaysaa kibirka Eebe iyo kuwa raacsan (Sura al-Hashr 59:23).
Yooxanaa 17:21-23: Ciise wuxuu ka codsaday aabihiis isaga oo raacsan: "Waxaa laga yaabaa in ay mid yihiin sidaan u mid nahay, waxaan ku dhex jiraa aniga iyo adiguba, si ay u noqdaan kuwo ku qumman hal ... "
Wada hadalkan dhexdiisa guddiga Quduuska ah ee Ciise wuxuu soo koobayaa qarsoodi: Waxaan nahay mid! Xaqiiqadan ruuxiga ahi waa sababta keentay inaan ka soocno Yuhuudda iyo Muslimiinta. Midnimada ruuxiga ah ee Aabbaha iyo Wiilka ee Ruuxa Quduuska ahi waa aasaaska iimaanka. Hase yeeshee, midnimadani uma muuqato fikrad macquul ah oo muuqaal ahaan hor taagan, laakiin waxaa la barbardhigi karaa magnet weyn oo isku daya inuu nagu qaado. Jacaylka Ilaah waa awood soo jiidasho leh.
Ciise wuxuu weyddiistay Aabbihiis inuu midkeeno mid ka mid ah, siduu isaga iyo Aabbihiisba midba midka kale u yahay, isaga iyo Aabbaha isaga. Saddexmaryada Qudduuska ah maaha dabeecad aan la aqbali karin balse xaqiiqda ruuxiga ah ee inagu dhex gali doono noolaha ilaahnimada nimcada. Waxaa loogu yeedhaa "jidhka Masiixa" (Rooma 12:4-5, 1 Korintos 12:27; Efesos 4:4,25) iyo "macbudka" Ruuxa Quduuska ah (1 Korintos 3:16) iyo mudnaan gaar ah oo lagu galo gudaha Quduuska Quduuska ah, ee Masiixa (2 Korintos 5:17, Yooxanaa 15:4) iyo kan Ilaah (1 Yooxanaa 4:16).
Axdiga Cusubi waxaa ka buuxa tilmaamo qarsoodi ah Saddexda Quduuska ah. Kuwa doonaya baaritaanka, akhrinta iyo sharaxaadda waxay ka fekerayaan aayaadka soo socda: Yooxanaa 17:1-3; 20,21-23; Falimaha Rasuullada 1:4-5; 2:32-36; 1 Korintos 2:10; 2 Korintos 5:19; Galatiya 4:4-6; Kolosayos 2:9-10; Cibraaniyada 9:14; Aayadaha 7:10; 21:22-23; 22:3-4 iyo kuwo kale. Waa in aan akhristo tixraacyada kuwaas oo ku saabsan midnimada Aabaha, Wiilka iyo Quduuska Quduuska ah ma aha oo keliya qummane laakiin sidoo kale tukanayo, mahadsanid iyo caabudid. Kaliya Ruuxa Quduuska ah ayaa noo soo bandhigi kara qarsoodiga Saddexda Quduuska ah. Ka dibna kama sii fekerno aragtida caajis ah, laakiin qirashada dhabta ah ee ka soo baxda waayo-aragnimada.
Fikirka ku saabsan Saddexda Qoduuska ah wuxuu ka sarreeyaa fahankeena aadanaha. Qarsoodigan qarsoodiga ah waxaa lagu fahmi karaa oo keliya ruux ahaan. Muslimiin badani maaha mid kufilan xagga maskaxda, sababtoo ah diinta Islaamku run maaha. Ciise wuxuu ku hadlay masaalooyinka kuwa aan aqbalin Injiilka. Sidaas darteed qof kasta oo raba inuu sharaxo Midnimada Saddexda Quduuska ah ee Muslimiinta aan u hoggaansamin Kitaabka Quduuska ah, wuxuu isticmaali karaa sawirro badan iyo tusaalooyin wax ku ool ah nolol maalmeedka. Ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadda ayaa jecel inay dhagaystaan.
Qorraxdu waa duufaan leh dhexdhexaad ah oo ah 1.5 milyan oo kiilomitir. Qaar ka mid ah safarkooda waxay gaadhaan dhulka inkastoo ay ka fogyihiin fogaan dhan 150 milyan oo kiilomitir oo siinaya iftiin, kuleyl iyo nolol. Dhamaan seddexda muuqaal, qorraxda, raajooyinkooda iyo kuleylku waa mid isku mid ah oo aan loo kala qeybin karin.
Korontada ayaa inta badan dhalisa koronto-dhaliye soo saara tamarta korontada ee dhalisa iftiinka, kuleylka iyo dhaqdhaqaaqa. Dhammaan saddexda, koronto-dhaliyaha, hadda iyo ficilka waa mid!
Biyaha waxay u muuqan karaan inay yihiin dareer, baraf ama midho. Xaalad kasta oo ay u muuqato, marwalba waa walax isku mid ah.
Qolku wuxuu leeyahay dherer, ballac iyo dherer. Haddii mid ka mid ah saddexda maqan, ka dibna qolku ma aha qol kale laakiin waa diyaar.
Qofka wuxuu ka kooban yahay jirka, ruuxa iyo nafta. Haddii mid ka mid ah saddexda jiran yahay, kuwa kale waxay sidoo kale xanuunsadaan. Haddii mid ka mid ah saddexda maqan yahay dadka kale ma jiri doonaan hab caadi ah.
Qoysku wuxuu caadi ahaan ka kooban yahay aabe, hooyo iyo carruur. Saddexdani waxay isugu jiraan midnimo. Furiinka wuxuu noqonayaa mid aan caadi ahayn oo xanuun leh.
Indhaha waxay ka kooban tahay dhowr qaybood: Waxaan aqoonsan nahay cadaanka indhaha, Iris midabka leh iyo ardayga madow. Dhammaantood waxay sameeyaan hal isha. Haddii mid ka mid ah qaybaha la waayo, waxaan noqon lahayn indhoole.
Ukunta waa mucjiso leh qolof, xajmigeeda iyo cadadkeeda. Qaar ka mid ah waxay ka dhalataa nolosha - ama ukun qallafsan!
Rinjiga cad ee iftiinka waxaa lagu kala saari karaa prismka seddex midab, sababtoo ah caddaanku waa isku dhaf midabyo badan.
Saddex xagal ayaa leh saddex xagal iyo saddex dhinac, laakiin marwalba waa hal joomitir.
Xisaabtu sidoo kale waxay taageertaa midnimada Saddexmidnimada. Soo-ururinta hal-gelinta iyo ku-daba-dheer iyo mid ka mid ah wuxuu sameeyaa saddex, laakiin hal mar ayaa ku dhufan hal jeer hal mid keliya. Marka laga hadlayo Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, iyagu ma ahaan doonaan qof kasta oo kali ah; laakiin wuxuu ku dhex jiraa midnimo dhammaystiran, halkaasoo qof kasta uu ku nool yahay kan kale. Xaqiiqadani, waxay u muuqdaan inay yihiin unug aan la qeybin karin.
Cajiinka rootiga rootiga ayaa sharxi kara sirtaas qarsoodiga ah. Daqiiqada, biyaha iyo dhinaca cusbo ayaan dhinacna u ekeyn rooti. Laakiin isku dardar-gelinta saddexdan qodob, qoryo iyo kuleyl ayaa ka dhigaya rooti. Sidaa daraadeed Qudduuska Quduuska ah qofna ma jiro keligiis ama madaxbannaan, laakiin nolol kasta oo ka mid ah kuwa kale iyo guud ahaanba waa mid.
Afrikada dhexdeeda wacdiye wacdi wuxuu booqday tuulo ku taal baadiyaha leh buul caws leh. Haweeney ayaa qoyskeeda cunto ugu karinaysay dheriga dabka furan. Wacdiyuhu wuxuu soo jeediyay inay iska fogeyso mid ka mid ah saddexda dhagxaan ee dherigu ku nastay. Naagtii ayaa ku qaylisay, "Haddii aan hal dhagax ka qaado, dherigu wuu dhici doonaa, cuntaduna gubanaysa dabka!" Wacdiyuhu wuxuu ugu jawaabay, "Fiiri," Ma karin kartid Atiriisnimada la'aanteed. Haddii aad hal qayb ka qaadatid, noloshaada oo dhan way burburaysaa oo waxaad geli doontaa dabka! " Wuxuu u macneeyay midnimada Saddexanka iyada oo ereyo fudud ka bixisay duruufaheedii.
Dhamaan tilmaamahan laga soo qaatay nolol maalmeedka ayaa daliil u ah midnimada Saddexanka! Iimaanka lama caddayn karo. Haddii aan caddeyn karno iimaanku mar dambe ma noqon doonto caqiido. Tusaalooyinku waa uun caawimaad iyo calaamado muujinaya nafsadooda kuwa raba inay fahmaan xaqiiqada ruuxiga ah, kuna hagaysa siraha iimaanka.
Tusaalooyinka aan kor ku soo sheegnay waxay wada leeyihiin in walxaha madaxa bannaan ay ku mideysan yihiin hay'ad sare. Luuqadaha ama dhaqammada aan wali si buuxda u horumarsan si adag ugama fikiraan lahjad ahaan. Ruuxa Quduuska ahi si kastaba ha ahaatee wuxuu ina barayaa caqli cusub oo u muuqda nin buunbuuniyay oo aan caqli gal ahayn nin caadi ah. Waxaan rumeysanahay, tusaale ahaan, inuu Ciise la fadhiisto aabihiis carshigiisa isla waqtigaasna uu ku nool yahay qalbiyadeenna. Tani waa mid aan loo maleyn karin muslimiin badan: Midkuu jannada fadhiyaa ama qalbiguu ku jiraa ha ahaato labadiina isku waqti!
Waxaan qiraynaa inaan xaq ku nahay dembiilayaal nimco. Qofka muslimka ahi wuu ku jawaabi karaa: haddii aad tahay dambiile ama aad xaq tahay, laakiin ma noqon kartid dambiile xaq ah.
Ruuxa Quduuska ah wuxuu barayaa kuwa raacsan Ciise caqli ahaan ruuxiga ah oo qofka muslimka ah uusan si fudud u fahmi karin. Fikirkooda adduunku wuu ka duwan yahay caqliga ruuxiga ah. Sidaa darteed waa inaan dulqaad u lahaan wadahadalkeena. Ka dib oo dhan, xaqiiqooyinka ruuxiga ah waxay umuuqdeen wax la yaab leh oo aan macquul ahayn anagana annaguna waqti dheer. U duceeyaha fahamka iyo dhiirrigelinta dadka muslimiinta ah waxay weli muhiim u tahay wadahadalka laftiisa.
Sidoo kale waa inaanu ilaawin wadahadalada aan la leennahay muslimiinta in ereyga "Midnimada" uusan waligiis ku dhex dhicin Kitaabka Quduuska ah! Sidaa daraadeed waa inaanu u dagaalamin Saddexmidnimada laakiin waa midnimada Ilaah! Xaqiiqada Eebbe, Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi waxay ka muuqdaan dhammaan buugaagta Kitaabka Quduuska ah, maxaa yeelay Ciise wuxuu adkeeyay midnimadiisa weligeed ah ee uu Aabbaha kula jiro Ruuxa Quduuska ah.
Muujinta sidoo kale waa khalad luqadeed Ingiriis iyo Carabi. Kitaabka Quduuska ah ma jiro eray ah “midnimada”! Masiixa iyo rasuulidiisa waxay muujiyeen Ilaahnimada saddexan, waligood kama aysan hadlin seddex ilaah oo kaladuwan. Waa inaan dib uga fikirno aasaaska iimaankeenna oo aan dib ugu laabanno xaqiiqda kitaabiga ah.
Muslimiin badan ayaan diyaar u aheyn inay dhageystaan qoraalada Kitaabka Quduuska ah maxaa yeelay waxay ka shakisan yihiin in la been abuuray. Jawaabaha macquulka iyo sayniska waxay waxtar u leeyihiin ardayda xiiseyneysa ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Tiro badan oo Muslimiin ah ayaa aqbali doona oo keliya jawaabaha quraanka iyo dhaqanka Islaamka. Waa inaan raadinnaa jumlado qarsoon oo ku saabsan Saddexanka Kariimka ah ee Qur'aanka laftiisa ee asaasiga ah.
Oraahyada Qur'aanka waxaa loo adeegsan karaa bilowga wada hadalka maxaa yeelay ilaa 60 boqolkiiba Qur'aanka ayaa ka kooban tibaaxaha iyo fikradaha Axdiga Hore, oo hadal ahaan loogu gudbiyey Muxammad xagga qoraallada Mishnah iyo Talmud . Qiyaastii boqolkiiba sideetan ee Qur'aanka waxaa laga soo qaatay sheekooyinka afka ah ee lagu kala qaado ee ku sugan Injiillada ama khuraafaadka laga helo diimaha Masiixiyiinta. Sidaas darteed waxaan xaq u leennahay inaan aqbalno oo soo saarno maragfurka Yuhuudda iyo Masiixiyiinta ee loo rogay astaamaha carabiga ee Qur'aanka, maadaama ay asal ahaan ka yimaadeen ilo kitaabiga ah. Waa inay si kastaba ha ahaatee uga buuxsamaan waxa naftooda ah ee ruuxiga ah. Intaa waxaa sii dheer astaamo badan oo Qur'aan ah oo ku qoran luuqada carabiga waxay wataan macnayaal kaladuwan waxayna u oggolaadaan turjumid kaladuwan. Marka waa la oggol yahay in lagu buuxiyo macnaha asalka ah ee Baybalka qoraallada Qur'aanka qaarkood.
Magacaabista Saddexanka Saddexanka ah ee Qur'aanka waxa ku jira 5 qaybood oo aayado ah oo Qur'aanka ka mid ah oo taageeraya xaqiiqada Ilaaha saddex ah:
Dhalashada Masiixa ee Maryan
Suurada al-Anbiya '21:91 iyo al-Tahrim 66:12 waxay bixiyaan waxyiga Eebe:
"Waxaan ku neefsanay iyada (qaar ka mid ah) ruuxdeena ah!"
Sidaas bay Masiixu ku abuuri lahaa Maryan. Eebe wuxuu ku hadlayaa jamac taas oo loo tixgelin karo inay calaamad u tahay isku duubnaantiisa. Wuxuu dhahay: annaga (nafteenna ayaan kaga dhex baxnay) ruuxdeena dhexdeeda! " Runtii Eebbe malagu malaa'igtii Jibriil ku tuuray Maryan, sidoo kale Jibriil ma uusan ku afuufin Ruuxiisa maryan maryan, taa bedelkeeda waxaa qoran in Eebbe ku afuufay ruuxiisa Maryan. Labadan aayadood midkood ayaa sheeganaya in Eebbe guud ahaan ku neefsaday Maryan; tan kalena waxay leedahay inuu ku afuufay ruuxiisii qeybihiisa gaarka ah!
Markhaatikan Qur'aanka ku jira ee caddaynta sheegashada muslimiinta ee ku saabsan dhalashada cilmiga leh ee Illaahay gebi ahaanba waa laga saaray. Aayadahani waxay cadeynayaan dhalashada Masiixa ee Ruuxa Eebbe. Dhammaan saddexda: Eebbe, Ruuxiisa iyo Masiixiisa ayaa iyaguna Qur'aanka uga dhex muuqda unug aan la kala saari karin.
Faallooyinka islaamku waxay arkeen daciifnimada aayadahan waxayna isku dayeen inay beddelaan macnaha iyagoo iyaga siinaya tarjumaad cusub: "Ciise waxaa Maryan ku abuuray Ruuxa Ilaah iyo eraygiisa." Laakiin tani maaha nuxurka dhabta ah ee aayadahan. Wareeggan ayaa loo tarjumay iyaga si loo baabi'iyo ilaahnimada Masiixa xididdadiisa.
Eebbe wuxuu ku taageeray Masiix Masiixiisa
Qur'aanka dhexdiisa waxaad ka heli kartaa saddex aayadood oo sheeganaya in Ilaah ku xoogeeyey Masiixa Ruuxa Quduuska ah, si uu u dhammaystiro mucjisooyinka neefsashada. Sida ku xusan aayadahaani, Masiixu wuxuu furay indhoolayaasha indhoolayaasha, oo wuxuu ku bogsiiyay kuwii baraska qabay, isagoo ereyadiisii ka soo sara kiciyey kuwii dhintay xabaaladoodii (Sura al-Ma'ida 5:110). Qur'aanku wuxuu ka warramaa toban ka mid ah mucjisooyinka Masiixa, oo sida Islaamku sheegay aanuu kaligiis fulin karin kaligiis, laakiin markasta isagoo kaashanaya Ruuxa Eebbe u soo diray. Tan macnaheedu waa in Eebbe, Ruuxiisa iyo Masiixu ay ku wada shaqeeyeen midnimo firfircoon!
Faallooyinka islaamku si kastaba ha ahaatee waxay carrabka ku adkeeyeen: Masiixu inuu awoodi waayey inuu mucjiso kaligiis sameeyo, sidaa darteed Allah waa inuu u soo diraa Jibriil si uu ugu xoojiyo falalkiisa. Ma ay fahmi karaan is-hoosaysiinta Masiixa ee yidhi: "Wiilku kaligiis waxba iskama awoodo inuu sameeyo. Wax kasta oo uu arko oo Aabbuhu ku samaynayo Wiilka ayaa samaynaya" (Yooxanaa 5:19-23). Laakiin qof kasta oo muslim ah weydiiya: Yaa awood u leh inuu soo celiyo kuwii dhintay? waxay heli doontaa jawaabta: "Allah oo keliya!" Laakiin haddii uu markaa weydiiyo: "miyaad ku raacsan tahay in Masiixu yahay Allah?" wuxuu heli doonaa diidmo adag. Xaqiiqadu waxay tahay in Allah, Ruuxiisa iyo Masiixu ay sameeyeen midnimo dhammaystiran oo ficil ah, xitaa Qur'aanka.
Masiixa - Ayatollah dhabta ah
Ku dhawaaqida dhalashada Masiixu ee Qur'aanka waxa uu siinayaa farriin xiiso leh oo xagga Eebe ka timid, kaasoo ku saabsan Masiixa:
Waxaan uga yeellay calaamo dadka iyo naxariis xagganaga ah (Sura Maryam 19:21).
Erayga Carabiga ee calaamadu waa ayatun, si wada jir ah u aqri natiijooyinka Allah ee "Ayatollah", oo macnaheedu yahay "mucjisooyinka gaarka ah ee Allah". Masiixu waa ninka keliya ee Ayatollah uu Eebbe laftiisa u dhigay calaamada dadka oo dhan. Isaga ayaa ku rumoobay qoraallada cajiibka ah ee Bilowgii 1:27 iyo Yooxanaa 14:9.
Eebbe wuxuu intaa ku sii daray in Masiixu yahay naxariis ka timid "annaga", isagoo ku hadlaya jamcadda. Hadalkani waxa uu ku hogaamiyay macallimiinta Qur'aanka ee afrikaba talo-bixin gaar ah. Waxay ogaadeen in Suurad kasta, marka laga reebo hal, ay ku bilowdo weedha: "Magaca Eebe, naxariis guud, ee naxariis leh!" Kuwaas raadinta islaamiga ah ee runta doonayay waxay soo gabagabeeyeen: Raxmadda (al-Rahman) waa Ilaaha Aabbaha ah, Naxariista (al-raxiim) waa Ruuxa Quduuska ah iyo Naxariista (al-Rahmat) lafteeda waa Ciise, wiilkii Maryan . Saddexda dhammaantoodba waxay wataan isla sheyga laftooda.
Muxammad si cad ayuu u tarjumay fasiraaddaas isagoo Eebbe u waxyooday: “Kuuma soo dirin adoo ahayn Naxariis kuwa Caalamka ah” (Suuradda al-Anbiya '21:107).
Muxuu ahaa naxariista Allah nolosha Muxammad? Wuxuu keenay sharci cusub, Shareecada, oo asaas u ah dowladdiisa diineed. Sharcigaani Eebbe badbaadin maayo qof muslim ah, laakiinse wuxuu ku xukumi doonaa qof kasta oo doonaya inuu xaqnimo ku sheegto camalkiisa wanaagsan. Hadana Ciise wuxuu soosaaray caddayn naxariista Eebbe mucjisooyinkiisa: Isagaa bogsiiya cid kasta oo u timid, wuxuu ka sara kiciyey kuwii dhintay, wuxuuna dunida ku keenay Ruuxa nabadda. Halkan waxaa ku caddaatay cidda runtii naxariis u keentay dunida oo naxariis ka buuxdo!
Masiix ereyga Eebbe iyo ruuxdiisa
Dhowr jeer oo Muxammad ayaa ka faaidaystay muujinta wacdiyihii Yooxanaa, in ciise uu yahay erayga huwan ee Ilaah (Suurada Al 'Imran 3:39,45,64; al-Nisa' 4:171; Maryam 19:34). Cinwaankan wuxuu ku qiray awoodda Masiixu inuu yahay awoodda buuxda ee ereyga Eebbe. Sida Qur'aanku sheegayo, Masiixa abuurista, bogsashada, cafiska, qalbi qaboojinta iyo cusbooneysiinta ereyga Eebbe waa mid jira oo firfircoon. Masiixu kaliya kuma uusan hadlin ereyga Eebbe laakiin isagaa isagaa shakhsi ahaaneed. Sida Qur'aanka ah, Masiixu wuxuu ahaa mid aan dembi lahayn, maxaa yeelay farqi kuma dhex jirin ereyadiisa iyo camalkiisa. Isaga doonistii Eebbe iyo Ruuxiisuba way ka muuqdeen, marka muujinta Eebbe yahay mid rabaani ah, Masiix erayga Eebbe waa mid rabaani ah.
Qur'aanku wuxuu ka marag kacayaa dhowr jeer in Masiixu uusan uur ahaan ahaan looraalin laakiin uu ahaa Ruuxa Eebbe oo jidh ahaaneed. Muslimiintu waxay qirayaan in wiilka Maryan uu yahay ruux lugaynaya dhulka, oo u muuqday nin, oo markuu dhintey ku noqday meeshuu u dhashay, xagga Eebe (Suurada Al 'Imraan 3:49,55; al-Nisa '4:158,171; al-Anbiya' 21:91; al-Tahrim 66:12). Erayadaas Islaamka ayaa u soo dhowaanaya sirta fahamka masiixiga ee diinta masiixiga. Tarjubaanadu, si kastaba ha ahaatee, waxay isku dayaan inay wax ka beddelaan tilmaantaan oo waxay ugu yeeraan Masiixu "abuuray" Erey iyo Ruuxii Eebbe abuuray. Laakiin tani kama muuqato Qur'aanka, waxaa keliya oo si qaldan loogu dhex galayaa.
Wadahadal ku Saabsan Quraanka Kariimka
Buugga muslimiinta ayaa laga dhex helayaa calaamado badan oo ka mid ahaanshaha Masiixa. Eebbe kor buu u qaaday wiilkii Maryan dhimashadiisa ka dib naftiisa sharaftiisa (Suurada Al 'Imran 3:55 iyo al-Nisa' 4:158). Diinta Islaamka, Masiixu wuxuu la nool yahay Allah maanta.
Wadahadal (Sura al-Ma'ida 5:116-117) Eebbe wuxuu weydiiyay Masiixa, bal inuu baray ragga inay iyagu aqbalaan naftiisa iyo hooyadiis inay yihiin laba ilaah oo aan ahayn Eebbe. Jawaabta Masiixa ee Qur'aanka su'aashan xasaasiga ahi waxay ahayd mid cad! Dariiqii Kiristanka ahaa wuxuu mala-awaalay noocan oo kale ah ee loo yaqaan ee Jasiiradda Carbeed, kaas oo ay diidaan kaniisadaha oo dhan. Malaha Muxammad wuxuu maqlay dariiqadan iyo fahamkooda khaldan ee Saddexanka. Tan iyo markaas Muslimiintu waxay u haystaan in masiixiyiintu rumeysan yihiin in Eebbe la seexday Maryan oo uu wiil ku dhalay. Waxay xaq u diidaan cayda noocaas ah! Waxaan sidoo kale xaqiijinaynaa inuu Muxammad sax u yahay inuu diido fikradan! Midnimada noocan oo kale ah ma jiro! Heshiiskan inta badan xiisadda ka dhex aloosan muslimiinta ee ka soo horjeedda diinta masiixiga waa baaba'aan! Waa inaanu u sharraxno inaynu aaminsanahay Saddexmidnimada ruuxiga ah ee Midnimada oo aan ahayn mid cilmiyaysan, oo ah Saddex midnimo oo ka kooban Ilaah, Ruuxiisa iyo Eraygiisa (Yooxanaa 1:1-14).
Intii lagu guda jiray wada hadaladaan Qur'aanka ee u dhexeeya Allah iyo Masiixa waxaa u muuqanaysa - Erayo la yaab leh, oo ah ka soo laabashadii Masiixu, ka dib Eebbe waa inuu marag u yeeshaa oo ilaaliyaa xertiisa agoonta ah maadaama Masiixu qudhiisa markhaati iyo adhijir u yahay xertiisa.Halkan Allah iyo Masiixu waxay wataan isla magac iyo magac isla mar ahaantaasna hoosta ka xarriiqaya cibaadada Masiixu ee Qur'aanka!
Shaki iigama jiro inaan ku wacdiyinno muslimiinta Qur'aanka. Buugga muslimiinta badbaadada gebi ahaanba waa ka maqan tahay! Annagu ma rumaysan karno waxyi ahaanshaha ee Qur'aanka. Laakiin waxaan ka helnaa jajabyo ka marag ah Masiixiyiinta markhaatiga ah ee ku jira kitaabka muslimiinta. Marka soo qaad, nadiifi oo u dhig sidii dhagxan oo dhagxan meesha saxda ah ee Injiilka. Islaamiyiinta islaamku ma dhagaystaan luqad kale oo aan ahayn ereyada Qur'aanka. Sababtaas awgeed ayaan ugu keenaynaa injiilka afkooda. Hadana ma ahan inaan soo xigano ereyada Qur'aanka hadaan si sax ah u aqoonno.
Rasuulladu waxay si cad u qiran yihiin jiritaanka Saddexmidnimada Quduuska ah.
Butros wuxuu yidhi: Mahad waxaa leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, kan naxariistiisa badan dib noogu soo beddelay rajo rajo leh tan iyo sarakicidda Ciise Masiix kuwii dhintay ... (1 Butros 1:3-10; 5:10)
Yooxanaa wuxuu qoraa: Taas ayaynu ku garanaynaa inaynu ku sii jirno isaga, isaguna inagu sii jiro, waayo, wuxuu ina siiyay Ruuxiisa, oo waan aragnay oo waannu u marag furaynaa in Aabbuhu Wiilka u soo diray inuu badbaadiyo dunida. Ku alla kii qirta inuu Ciise yahay Wiilka Ilaah, Ilaah baa ku sii jira isaga, isaguna wuu ku sii jiraa Ilaah. (1 Yooxanaa 4:13-16; 5:12,20)
Bawlos wuxuu qoray: Ilaah wuxuu doonayaa dadka oo dhan inay badbaadaan oo ay runta gartaan. Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, waana ninka Ciise Masiix ah, oo naftiisii dadka oo dhan furashadooda u bixiyey. (1 Timoteyos 2:4-6; 1 Korintos 3:17-18)
Markhaatiyadii rasuullada ayaa badanaa neefsanaya. Waxay ka marag kacayaan xaqiiqada ruuxiga ah ee midnimada Saddexanka Quduuska ah nolosheena.
Nin oday ah oo ka tirsan kaniisad ku taal dalka Lubnaan ayaa booqday wiilkiisa, injineer, oo ku sugan Qatar, gacanka Persian Khaliijka. Markuu tukaday ka hor cuntada oo qofkasta joogo, martida muslimka ah ayaa u soo dhawaaday oo u sheegay, wuxuu arkay inuu yahay nin cibaado badan; sidaa daraadeed wuxuu jeclaan lahaa inuu u soo jeediyo inuu noqdo muslim isla markaana helo dhammaystirka naxariista Allah.
Odayga ayaa si xikmad leh ugu jawaabay: "Waxaan ka fikiri doonaa talo soo jeedintaada. Haddii aad i siin karto wax ka badan wixii aan hore u soo qaatay, waan ka fiirsan doonaa deeqdaada!"
Isaga oo yaaban, ayuu Muslimku weydiiyey: "Maxaad leedihiin oo aynaan haysanin?"
Odaygu wuxuu ugu jawaabay: "Ilaah waa aabbahay, wuu i garanayaa, wuu ilaaliyaa oo wuu i jecel yahay. Masiixu waa Wanka Ilaah, oo iga qaaday dembiyadayda oo dhan, oo uu Ilaah ila heshiisiiyey. cadaabta maxaa yeelay, isagu xaq buu iga dhigay Ilaah hortiisa. ma dhiman doono, laakiin weligay waan noolaan doonaa oo waxaan ka sara kici doonaa kuwii dhintay sidii Sayidkaygu kuwii dhintay ka soo sara kacay” (Yooxanaa 11:25-26).
Qofka muslimka ahi si qoto dheer ayuu ugaga fikiray sababta oo ah odaygu wuxuu markhaanti uga marag furay ereyo fudud xaqiiqada midnimada Masiixiga Quduuska ah noloshiisa.
Dareenka sidan ah waxaan u salaanaynaa dhammaan intii loogu yeedhay adeegga Rabbi Ciise dhexdooda muslimiinta waxaanan u duceyneynaa in Rabbigu iyaga u horseediyo wada hadallada ruuxiga ah ee lala yeelanayo kuwa raacsan Muxamed ee deegaanadooda.
Nimcada Rabbi Ciise Masiix
iyo jacaylka Ilaah,
iyo wadaagista Ruuxa Quduuska ah
kulligiin ha idinla jiro.
(2 Korintos 13:13)
6.11 -- B A A R I S
Akhristaha qaaliga ahow!
Haddii aad si taxaddar leh u bartay buug yarahan, si fudud ayaad uga jawaabi kartaa su'aalaha soo socda. Cid kasta oo ka jawaabeysa 90% dhammaan su'aalaha ku jira sideeda buug-yare ee taxanahan, wuxuu ka heli karaa caddeyn xarunteenna
siyaabo waxtar leh oo loogu talagalay wadahadal lala yeesho Muslimiintu waxay ku saabsan yihiin Ciise Masiix
Dhiirrigelinta adeegyadiisa / teeda mustaqbalka ee Masiixa.
Muxuu yahay qeybta hore ee qirashada Islaamiga ah ee iimaanka (shahada) micnaheedu?
Siyaabo Muxuu Muxuu ugu diidey Saddexanka Quduuska ah?
Immisa jeer ayaan Quraanka ku dhex akhriyi karaa in Eebbe lahayn wiil? Waa maxay diidmadaani marka loo eego 1 Yooxanaa 2:18-25?
Muxuu Ciise Ciisi Maryan ugu yahay Islaamka Islam uusan u ahayn Wiilka Ilaah?
Sidee Qur'aanku ku adkaysanayaa inuu Masiixu yahay addoonka Allah oo la adeeco?
Muxuu Ruuxa Quduuska ahi ugu noolaan karin Islaamka? Maxay tani uga dhigan tahay nolosha ruuxiga ah ee muslimiinta?
Muxuu Eebbe weligiis loogu fahmin inuu yahay Aabbaha Quraanka?
Maxaa ka maqan aragtida Islaamka ee Ilaah?
Maxay sheegaysaa saddexda aayadood ee Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan Midnimada Saddexanka? Maxay aayadahan u macno yeelan karaan adeegyadeenna dhexdooda ee Muslimiinta?
Muxuu Eebbe Axdiga Hore mararka qaar uga hadlayaa naftiisa isaga oo ah "Annaga" (wadar ahaan jamac)? Waa maxay macnaha saxda ah ee erayga Cibraaniga ah “Elohim”?
Sidee ayay suurtogal u tahay in lagu sharraxo ducaadda Haaruun (tirooyinka 6:24-27) iyo cibaadada rabbaaniga ah ee Seraphim ee Ishacyaah 6:3 sida qirashada Ilaah Saddexmidnimada?
Muxuu Sabuurradii 2:1-7 na barayaa markay tahay xagga Saddexanka?
Muxuu Ishacyaah 9:6 wali ugu sii noqon karaa tixraac u gaar ah midnimada Saddexanka?
Sidee buu qoraaga warqaddu ugu qoray Cibraaniyada (1:9) sharxay Sabuurradii 45:6-7? Maxay tan ku muujin kartaa wadahadalada aan la galno Muslimiinta?
Sababtee buu Sabuurka 110:1 wali ugu yahay caqabad ku haysa Yuhuudi kasta iyo Muslim kasta?
Balanqaadyada Axdiga Hore muxuu uyeelan karaa Muslim ama Yuhuudi?
Waa maxay macnaha erayga "Immanuel" magaca Ciise? Meeday yaboohtan lagu qoray kitaabka nebiyada?
Muxuu muujinta qaaska ah ee Saddexanka Quduuska ahi raacday baabtiiskii Ciise ee webiga Urdun? Micnaha ereyga gaagaaban ee Ilaah muxuu ka dib muxuu u noqon karaa qofka muslimka ah? Kumaa hor joogsan kara Ilaaha Qaadirka ah inuu wiil yeesho hadduu doonayo inuu mid yeesho?
Sidee buu Ciise ugu sharaxay cinwaankiisa "Masiixa" sunagogyada Naasared? Muxuu yahay waxyigani micnihiisu waxa weeye fahamka midnimada Saddexanka Saddexanka ah?
Xagee guddigii weynaa ee Ciise ka heli kartaa tilmaan ku saabsan midnimada Saddexanka Quduuska ah?
Muxuu Ciise ugu dhihi waa: "Aniga iyo Aabbuhu labo baan nahay"? Maxaynu haddaba markasta uga hadlaynaa laba ilaah oo kala duwan muslimiinta?
Maxaan ka aqbalnaa Yooxanaa 14:9-11 ee ku saabsan qarsoodiga qotodheer ee Saddexanka Saddexanka ah?
Muxuu Ruuxa Quduuska ah u sharfayaa Wiilka sida Wiilku had iyo jeer u maamuuso Aabihiis?
Muxuu Ciise ballanqaaday Yooxanaa 14:23 oo ku saabsan midnimada Saddexanka?
Waa kuwee fahamka muhiimka ah ee u leh saddexalka Ilaah ee Ciise muujiyey Yooxanaa 17:21-23?
Muxuu ereyga "Trinity" khalad luqadeed ugu yahay Ingiriisiga marka loo tixraaco Ilaaha kitaabiga ah? Muxuu ereyga "saddexlaha ah Ilaah" ugu sii habboon yahay in loo sharraxo xaqiiqada Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah? Maxaan ku nuuxnuuxsanay wadahadalada aan la leennahay Muslimiinta iyo Yuhuudda ee ku saabsan mowduucan?
Maxay qorraxda, iftiinka qoraxda iyo kuleylka qorraxda u tilmaamaan Ilaaha saddexanka ah?
Sidee bay ku keenaan koronto-dhaliye, koronto koronto iyo saameyntooda kuleylka, marawaxadaha, qaboojiyeyaasha ama kombuyuutarrada muujinaya midnimada Saddexanka?
Maxaan ka baran karnaa biyaha, qolka iyo qofka sida un ururada adag?
Sidee isha, ukun ama saddex-xagal tilmaamayaa midnimada Saddexanka?
Waa maxay farqiga u dhexeeya 1 + 1 + 1 iyo 1x1x1? Sidee cajiinka uga soo baxa bur, biyo iyo khamiirku noqdaan rooti?
Maxay u yihiin tilmaamahan nolol maalmeedka inaysan u ahayn caddeynta midnimada Saddexanka Quduuska ah? Maxay Masiixiyiintu ugu awoodaan inay ku fikiraan ereyada lahjadaha iyo muxuu u baahan yahay qofka muslimka ah inuu fahmo umuuqdo mid diidan xaqiiqada ruuxiga ah?
Muxuu Muxammad u maleeyay in Masiixu ka dhashay Maryan? Sidee mala-awaalkani noogu caawin karaa wadahadalada aan la galno Muslimiinta?
Maxay tahay sababta xoojinta Masiixa ee ku jirta Ruuxa Eebbe u tilmaamayaa "midnimada ficilka" Eebbe, ruuxiisa iyo Masiixa?
Sidee buu Qur'aanku u sharraxay in Masiixu yahay wiilka keliya ee Ayatollah uu Ilaahay magacaabay? Sidee bay aayaddan Qur'aanku u caawisay qaar ka mid ah macallimiinta Qur'aanka Afrikaanka ah inay u soo dhowaadaan xaqiiqada Saddex-jirka ee Quduuska ah?
Sidee bay ku muujisaa hadalka Qur'aanka ee ah in Masiixu “eray ka yimid xagga Eebbe” ama “ereygiisa” inuu jidh ahaan inaga caawin karo wada hadalka aan la galno Muslimiinta?
Maxay sharaxaadda Qur'aanka ee Masiixa loogu aqoonsaday inuu yahay “ruux xagga Eebbe ka yimid” in uu inaga caawin karaa in aan u sharraxno Muslimiinta daa'imka iyo rabbaaniga ina Maryan?
Muxuu yahay wada hadalka Qur'aanka ee u dhexeeya Allah iyo Masiixa ka dib markuu jannada kor u qaaday micnaheedu? Maxeynu muslimiinta kula aqbali karnaa in Quraanku Quraanka, oo uu Muxammad diiday, ay tahay inaguna inagu diidaan? Sidee heshiiskani u abuuri karaa jawi wanaagsan oo lagu tuso muslimiinta “ruuxiga ah” ee ah Trinity?
Waa maxay shuruudaha aasaasiga ah ee loogu sharraxayo qofka muslimka ah midnimada ruuxiga ah ee Saddexanka Quduuska ah?
Markhaatiyaashii rasuullada Masiix sidaad u fahamteen ayaa muujinaya midnimada Saddexanka Quduuska ah sida ugufiican?
Miyaad na tusi kartaa halka erayga "Trinity" uu ku yaal Kitaabka Quduuska ah?
Ka-qeybgale kastaa ee su'aashahan waxaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta siduu u arko iyo inuu weydiisto qof kasta oo lagu kalsoon yahay oo ku yaqaan markii uu ka jawaabayo su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga oo qoraal ah oo ay ku jiraan cinwaankaaga buuxa ee waraaqaha ama emaylkaaga. Waxaan kuu duceyneynaa Ciise, Rabbiga nool, inuu soo diro, hago, xoojiyo, ilaaliyo oo uu kula joogo maalin kasta noloshaada!
Abd al-Masih iyo walaalihiis xagga Rabbiga
U dir jawaabahaaga:
ama emayl ahaan ugu dir:
Masiixu wuxuu yidhi:
RABBIGA ruuxiisu waa dul saaran yahay,
maxaa yeelay, wuxuu ii subkay
Si ay injiilka ugu wacdiyaan masaakiinta.
Wuxuu ii soo diray inaan bogsiiyo kuwa qalbi jabay.
iyo in xorriyadda loogu dhawaaqo kuwa maxaabiista ahiyo inaad wax u aragto kuwa indhaha la',
inuu xorreeyo kuwa dulman,
iyo inaan dadka ogeysiiyo sannadda la aqbalo ee RABBIGA.
(Luukos 4:18-19a :)
Page last modified on March 24, 2020, at 01:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)